News • VECTOR
LeaveaComment	/ News / By Than Htun Oo
သီတင်းကျွတ်လပြည့် အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်သည် မယ်တော်ဖြစ်ဘူးသော သန္တုဿီတနတ်သားကို အကြောင်းပြုပြီး တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှာ ဝါတွင်းသုံးလပတ်လုံး အဘိဓမ္မာတရားတော်တွေကို ဟောပြော အောင်မြင် ပြီးဆုံးတဲ့နေ့ ဖြစ်လို့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ကို အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ လို့လည်း ခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်း ခြံရံလျက် တာဝတိံသာမှ သင်္ကဿနဂိုရ်ပြည်သို့ ဆင်းသက်တော်မူသောနေ့၊ ဗြဟ္မာ နတ်လူသုံးပုံသူတို့ မြတ်စွာဘုရားအား အတူတကွကြည်ဖြူ ကော်ရော်ပူဇော်ကြသောနေ့၊ လောကဝိဝရဏတန်ခိုးတော်ကြောင့် စကြာဝဠာတစ်ဝှမ်းလုံးကို တိုးလျှိုပေါက်မြင်ကြရသောနေ့ စသောဂုဏ်ထူးဝိသေသ အထူးထူးနှင့်ပြည့်စုံသော နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် သီတင်းကျွတ်လပြည့် အခါသမယမှာ မိဘဆရာသမားတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူး တွေကို အထူးသိမြင်လေးမြတ်နိုင်သူများဖြစ်ကြပြီး၊ရဟန်းတော်များ ဝါမှထသောနေ့ဖြစ်သကဲ့သို့ ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါမှလည်း ကင်းလွတ်ထမြောက်ကြ လျှက် ဘေးရန်အန္တရာယ်အပေါင်းမှဝေးကွာ၍ စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပါစေကြောင်း “Vector Online Learning Platform မိသားစု” မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်🙏🙏🙏
ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဆရာဒေါက်တာမိုးကျော်သူ Mkt Burman ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာက Newcastle university Malaysia က AP Microbiologist တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင် အနံ့အရသာ ဘာလို့ပျောက်တာလဲဆိုတာကို အသေအချာရှင်းပြထားပြီး လုံး၀ မပေါ့ဆကြဖို့သတိပေးရေးသားထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်မြင်းခြံ ပါလာပြီး သူနဲ့ထိတွေ့ဆက်စပ်ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်တွေ၊သူနာပြုတွေ၊ဝန်ထမ်းတွေ၊စသဖြင့် သူနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သမျှတွေကတစ်ဆင့် ကိုဗစ်က မင်းအနားမှာပါ ၊မစစ်ကြည့်သေးလို့ မသိတာပါ ဆိုတာ တကယ်ကြီးဖြစ်လာနေတာမို့ အားလုံးပဲ လုံးဝမပေါ့ဆကြဖို့အတွက် ဆရာဒေါက်တာမိုးကျော်သူ Mkt Burman ကိုခွင့်တောင်းပြီး သူ့မူရင်းအတိုင်းပဲ ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ သတင်းများတော့ အချိန်လေးရတာနဲ့ လာဖတ်ပါတယ်။ ရခိုင်ကနေ စခဲ့တာ ရန်ကုန်ကို တဖြည်းဖြည်း ရောက်လာတာလည်း မြင်ရ ကြားရပါတယ်။ ကြောက်တဲ့သူတွေလည်းကြောက်၊ မထူးပါဘူးကွာ ပြောတဲ့သူလည်းပြော။ နေ့လည်က ကိုယ်တို့ ဆရာကြီးများ …
ကိုဗစ်က မင်း အနားမှာပါ၊ မစစ်ကြည့်လို့ မသိတာပါ နှင့် အနံ့ အရသာပျက်ခြင်း ပြဿနာ Read More »
ငါန်းဇွန်မြို့နယ် ပညာရေးစုံညီပွဲတော် မှာ Vector Computer Center မိသားစု အနေဖြင့် သင်တန်းကြေး (၇၅၀၀၀ိ/) တန်ဘိုးရှိ ( အခြေခံသိစရာ တတ်စရာကွန်ပျူတာ)ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာတွဲ တစ်ခုကို ရာသက်ပန်လေ့လာသင်ယူခွင့်ဆု အဖြစ် (၄)ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်(၂)ဦးနဲ့ (၃)ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင်(၃)ဦး တို့ကို ဆုချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ “ကိုယ်တိုင်လေ့လာ ၊ကိုယ်ဆရာ ၊ လိုရာတတ်မြောက် ၊ ထင်တိုင်းပေါက်” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေး နဲ့အညီ Self Study Self Control တွေ တိုးတက်လာပြီး အချိန်မကုန်ငွေမပမ်းပဲ ရည်မှန်းချက်တွေ ပေါက်မြောက် အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေ။
အဖြူအမဲ ဓာတ်ပုံကို အရောင်ဖြည့်သွင်းနည်း
LeaveaComment	/ News, Video / By Than Htun Oo
တစ်ခါတစ်လေကျတော့ အရောင်အသွေးလေးတွေနဲ့မှ စိုစိုပြေပြေ ဖြစ်တတ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒီလိုအခါမျိုးမှာ ကိုယ်လိုသလို အရောင်လေးတွေဖြည့်သွင်းပြီး စိုပြေလှပတဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ နည်းလေးပါ။
LeaveaComment	/ News, ဆောင်းပါး, ပညာဒါန / By Than Htun Oo
ပြန်/ဆက် မှာ ကျင်းပတဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် စာဖတ်ဝိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးပွဲလေးကို တက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒေါက်တာ မတင်ဝင်း ရေးတဲ့ “အလုပ်ဆိုတာ အင်အားပါ” ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး ဆွေးနွေးကြတာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီစာအုပ်ကို အမှာစာနဲ့ မာတိကာလောက်ပဲဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ကိုယ့်ဘဝအတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့ယှဉ်ပြီးတော့ အနှစ်ချုပ်လေးလောက်ပဲပြောဖြစ်တယ်။ သူတို့ဆွေးနွေးတာလေးတွေကိုနားထောင်ရင်း ကံ အကြောင်းတရားတွေကိုတွေးမိတယ်။လူတွေ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါ မတူညီကြသလို ကံအကျိုးပေးဆိုတာတွေကလည်း အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံရှိကြတယ်လေ။အဲဒီမှာ အတိတ်ကံဆိုတာ ကိုယ်မတတ်နိုင်တော့ပေမယ့် ပစ္စုပ္ပန်ကံဆိုတာကတော့ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့အရာပါပဲ။ဒါကို သတိမူပြီး ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်တိုင်းမှာ စေတနာမေတ္တာလေးတွေထည့်ပြီး စိတ်လိုလက်ရ စူးစူးစိုက်စိုက်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ရလာဒ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာပြီး ကံကောင်းခြင်းရဲ့အထောက်အပံ့အင်အားတွေ ဖြစ်လာမှာအမှန်ပါ။ နောက်တစ်ခုက ဘာမှမလုပ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ဖူး ဆိုတာလိုပဲ အလုပ်တိုင်းမှာ အဲဒီ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်းကျင်နဲ့ လောက ဆိုတာ ရှိစမြဲဖြစ်ပါတယ်။သမိုင်းဦးဘုံမြေခေတ်ကတည်းက ထွန်းကားခဲ့တဲ့ အလုပ်ခွဲခြားလုပ်ကိုင်ခြင်း စနစ်တွေနဲ့အတူ အလုပ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အင်အားတွေ၊စွမ်းအင်တွေ ၊အာနိသင်တွေဆိုတာကလည်း …
ကိုယ့်လက်ခုပ်ထဲက “ကံ” Read More »
LeaveaComment	/ News, ဆောင်းပါး / By Than Htun Oo
ကျောင်းတုန်းက သင်ခဲ့ရဘူးတဲ့ ကဗျာထဲကလို “ သန့်သန့်စင်စင်ရေကိုမြင်လည်း ရေတွင်ဆိပ်ခိုး ပါလေနိုးနဲ့ စိုးရွံ့ မသောက်သာပြီ တကား” ဆိုတာလိုပဲ အတို့အမြှုပ်ကို ငပိရည်ကောင်းကောင်းနဲ့ ချပေးလာတာတောင်မှ ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ မြေသြဇာ တွေရဲ့ ဓာတ်ကြွင်းတွေပါလေမလားရယ်လို့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ စားနေရတဲ့ ဘဝတွေဖြစ်လာနေပါပြီ။ အကောင်းဆုံးကတော့“အိမ်နောက်ဖေး ဈေးဆိုင်တည်” ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း တနိုင်တပိုင်ဖြစ်တဲ့ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်ခင်းလေးတွေကို နေရာအခက်အခဲမဖြစ်စေတဲ့နည်းလမ်းတွေသုံးပြီး အိမ်တိုင်းလိုလို စိုက်သင့်တဲ့ ကာလတစ်ခုပါပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ ကန်စွန်းမျိုးစေ့တွေကို ထူထူလေးပက်ကြဲပြီး အခုပုံထဲကအတိုင်း ပျိုးဘောင်လေး ၂ခုမှာ စိုက်ထားလိုက်တယ်။ကြော်စားမလား ၊မကျည်းရွက်နဲ့ အချဉ်ရည်ဟင်းချက်မလား အိုကေပဲ။
Website Building Bootcamp မန္တလေးမြို့တွင်ဖွင့်လှစ်မည်
News / By Myat Min Lu
လှပသေသပ်တဲ့ Website တစ်ခုကို ၂ ရက်အတွင်း အလွယ်တကူ ဖန်တီး ရေးဆွဲတတ်လိုပါသလား? Website Building Bootcamp ကို Mandalay မြို့မှာ ဖွင့်လှစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Website Building Bootcamp (WBB) ခေတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရ အသေးစား အလတ်စားလုပ်ငန်းတွေမှ အစပြုလို့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေ အပါအဝင် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီးအတွက် Website အမျိုးမျိုးကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ပြီး ရပ်တည်ကြရတော့မယ့် အချိန်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဘယ်သူတွေအတွက်လဲ? Web Design နှင့် Web Development လေ့လာနေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အွန်လိုင်းနယ်ပယ်တွင် ကျင်လည်နေသော Digital Marketer များ မိမိရဲ့ Portfolio ကိုလှပသေသပ်အောင် တည်ဆောက်ချင်သော Photographer များ နှင့် Freelancer များ ကိုယ်ပိုင် …
Website Building Bootcamp မန္တလေးမြို့တွင်ဖွင့်လှစ်မည် Read More »
သင်ခန်းစာများ Update လုပ်ခြင်း (10 Feb 2019)
မင်္ဂလာပါ “ဝဘ်က်ဆိုဒ်ရေးဆွဲနည်း(WBC)” အွန်လိုင်း course တွင် အောက်ပါသင်ခန်းစာများ ထပ်မံထည့်သွင်းပြီး ဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာ။